Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Technology » Helsinki na-achọ otu nde ndị ọbịa na-ewu ewu na 2019
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Finland na -agbasa ozi ọma • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Emepụtara ahụmịhe njem nlegharị anya pụrụ iche nke obodo nke Helsinki yana onye ya na ya VR-studio ZOAN. A ga-ewepụta Virtual Helsinki (VR-Helsinki) na Slush, ihe omume mbido ụwa, na 4-5 Disemba.
Virtual Helsinki bụ dijitalụ ejima nke Helsinki nke emere site na imepụta 3D. Ebumnuche bụ ịkọwapụta Helsinki dị ka etiti nke ọkachamara VR / AR, yana ịdọta otu nde ndị ọbịa na Helsinki na 2019.
“Virtual njem bu gburugburu ụwa na-akpali ma na-eto eto isiokwu. Ndị na-azụ ahịa na-amatakwu banyere mmetụta ihu igwe nke njegharị ma na-achọsi ike ime mkpebi ndị bara uru. Virtual tourism na-akwado Helsinki nwere ebumnuche nke ịbụ ọsụ ụzọ na-adigide njegharị ma na-ewusi aha anyị ike dị ka obodo nke na-eji ihe ọhụụ kachasị ọhụrụ, ”ka Laura Aalto, CEO nke Helsinki Marketing na-akọwa.
Ndụ obodo, imewe na okike
N'oge na-adịbeghị anya, Helsinki meriri European European Capital nke Smart Tourism ọhụrụ European Commission, ụkpụrụ nyocha nke gụnyere mmepe mmepe nke njem, ojiji nke dijitalụ na ọrụ ndị njem, ọdịnala ọdịnala na-atọ ụtọ na onyinye ndị njem ọhụụ. VR-Helsinki jikọtara otu isiokwu.
N'ime ahụmịhe obodo ahụ gosipụtara na Slush, ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ njem nlegharị anya nke Senate Square, ụlọ nke ọmalịcha Finnish na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Alvar Aalto na Munkkiniemi na agwaetiti ntụrụndụ nke Lonna. A na-esonye njegharị ahụ site na egwu na oge mgbanwe.
Ọdịnaya sitere n'aka ndị na-enye ọrụ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri na ụlọ ọrụ ndị njem na-ererịrị ahịa maka ebe ha na-aga vidiyo vidiyo 360-enwere ike ịlele na isi okwu VR, echiche maka Virtual Helsinki sara mbara. VR-Helsinki na-enye ndị ọbịa ohere ịgagharị na nhichapụ kọmputa nke Helsinki, enwere ike ịmepụta ahụmịhe ndị ọzọ dị iche iche. N'ọdịnihu, VR-Helsinki ga-arụ ọrụ dị ka ikpo okwu dijitalụ nke na-enyekwara ndị na-enye ọrụ aka ịchụso azụmaahịa ha.
“Dịka ọmụmaatụ, ndị ọbịa nwere ike ịgagharị Helsinki dị ka ọ dị na mmalite narị afọ nke 20 ma ọ bụ zụta ngwaahịa ndị Finnish na-emepụta ma ziga ha n'ụlọ ha site na post. Tụkwasị na nke a, dị ka eziokwu dị adị ga-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị nso n’ọdịnihu dị nso, ndị enyi si n’akụkụ ụwa niile nwere ike izute ma chọpụta ebe ndị mebere ọnụ, ”ka Miikka Rosendahl, onye isi oche ZOAN kọwara.
“Helsinki chọrọ inye ndị ọbịa ọmarịcha ahụmahụ. Ahụmahụ obodo ahụ mebere na-enye ohere na-akparaghị ókè ịga leta Helsinki site na nkasi obi nke sofa nke aka ya. VR-Helsinki nwekwara ike iji kwalite Helsinki dị ka obodo nnabata maka nzukọ na mmemme, ”Laura Aalto na-agbakwụnye.
VR-Helsinki ga-adị ka nke afọ na-esote, dịka ọmụmaatụ site na ụlọ ahịa ọdịnaya VR na n'ọtụtụ ihe omume na ebe dị iche iche gburugburu ụwa.